food Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / food
ह्याङ्गओभर हटाउने ११ उपायहरू!!
Tags: alert-news, drinks, food, hangover, healthtips, in-focus
खबरडेस्क, २९ चैत । जन्मदिनको अवसरमा होस् या अफिसमा पदको बढुवा होस्, विवाहको उत्सव मनाउन होस् या परीक्षामा पास भएको अवसरमा, रातिको बेला अलिअलि वा धेरै नै मात्रामा मध्यपान गर्नु प्रौढ मानिसहरूको स्वभाव नै हो। खाउन्जेल रमाइलो लाग्ने, सबै कुरामा… बाँकी अंश »
स्वदेशी चामल उद्योग सङ्कटमा
Tags: alert-news, birgunj, food, nationalricemill, parsa, troubles
वीरगन्ज, २७ चैत । चामलको भन्सार मूल्याङ्कन घटाएर धानको पुरानै मूल्य कायम राखेपछि यहाँका स्वदेशी चामल उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । स्वदेशी चामल उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले धानको भन्सार मूल्याङ्कनलाई पनि पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग चामल व्यवसायीहरुको छ ।… बाँकी अंश »
व्रतबन्धको प्रसाद खाँदा मानिस बिरामी
Tags: alert-news, bratabandaprasad, food, foodtest, mahottari, modeltest, sickness, stalefood
महोत्तरी, १८ चैत । व्रतबन्धको प्रसाद खाएर महोत्तरीको बर्दिवासमा १०० भन्दा बढी व्यक्ति बिरामी भएपछि स्थानीय प्रशासनले खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षणका लागि सङ्कलन गरेको छ । गत आइतबार राति सो व्रतबन्धको प्रसाद खाँदा १५० व्यक्ति बिरामी भएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिवासले… बाँकी अंश »
शाकाहारी भोजनका फाइदा र बेफाइदा
Tags: alert-news, food, harmful, healthbenifits, in-focus, vegeterainfood
खबरडेस्क १० फागुन । नेपालमा ठुलो मात्रामा पशुपंक्षीको काटमार हुन्छ । पशुअधिकारवादीहरुले यसरी पशु मारेर मासु खानुभन्दा शाकाहारी हुनु राम्रो हो भन्दै अभियान नै चलाएका छन् । तर, शाकाहारी हुनुका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन् । फाइदा शाकाहारी भोजनमा… बाँकी अंश »
के के छन् अम्बाका फाइदाहरू
Tags: alert-news, benifits, food, fruits, guava, healthbenifits, healthtips
खबरडेस्क ८ फागुन । –बिहान खाली पेटमा २००/३०० ग्राम अम्बा नियमित रुपमा सेवन गर्नाले पाइल्स रोगका लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यसको सेवनले पाइल्स हुन दिँदैन। –ताजा अम्बाको सेवनले पुरानो खोकी तथा रुघालाई भगाउँदछ। –अपच, ग्यास आदिका लागि अम्बा एकदमै राम्रो… बाँकी अंश »
पनिर प्रयोग गर्ने कारणहरू थाहा पाउनुहोस
Tags: food, foodtips, in-odd, panir, usingpanir
खबरडेक्स,३ फागुन । पनिर एउटा यस्तो स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ हो, जसको भोजमा महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । पार्टी सानो होस् वा ठूलो पनिरले हरेक पार्टीको शोभा बढाउँछ । दूधबाट बन्ने भएकाले पनिरमा भिटामिन, क्याल्सियम, फस्फोरस, प्रोटिन, जिंकजस्ता पौष्टिक पदार्थ पाइन्छन् ।… बाँकी अंश »
भैंसेपाटीमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु नष्ट
Tags: alert-news, bhainsipati, destroyed, expiryfood, food, kathmandu, lalitpur
काठमाडौँ, २० माघ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको अनुगमन टोलीले आज भैंसेपाटीस्थित विष्णु स्टोरमा आकस्मिक अनुगमन गरी विभिन्न खाद्य तथा पेयपदार्थ नष्ट गरेको छ । टोलीले माउन्टेन डिउ, पेप्सी, फ्यान्टा, दालमोठ, पास्ता, सनफ्लावर तेल, बिस्कुटलगायत १५ वटा म्याद गुज्रेका खाद्य… बाँकी अंश »
हुम्लामा खानेपानी र खाद्यान्न अभाव
Tags: alert-news, drinking-water, economics, food, humla, shortage
हुम्ला, १३ पुस । खडेरीका कारण पानीको मुहान सुक्दा सदरमुकाम सिमीकोटमा पानीको हाहाकार भएको छ । एक गाग्रो पानी ल्याउन दिनभरिको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता यहाँका जनताको दैनिकी बनेको छ । यसैगरी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन थालेपछि नेपाली काँग्रेस, नेकपा -एमाले)… बाँकी अंश »
चाउचाउ खाने बानी छ भने होसियार !!!
Tags: alert-news, bad-health, beware, food, noodles, snacks
चाउचाउ नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्न्याक्समा पर्छ । छिटोछरितो र स्वादिलो हुने हुँदा हामी मध्ये धेरैले चाउचाउ सेवन गरिरहन्छौं । बच्चालाई मात्र होइन जवान र बृद्धहरुसम्म पनि चाउचाउ मन पराउँछन् । तर यही लोकप्रिय खाजा चाउचाउ स्वास्थ्यका लागि भने राम्रो हुँदैन… बाँकी अंश »
खाद्यान्न परीक्षण प्रयोगशाला वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने
Tags: alert-news, food, food-testing, health, kathmandu, measurement, nepal-food-corporation, nepaljapan, quality
काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरिने ‘आधुनिक खाद्य प्रयोगशाला’ आगामी वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान, जिल्ला विकास समिति, काठमाडौँ र भारतीय दूतावासको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको सो प्रयोगशाला भवनको करिब ९५ प्रतिशत काम… बाँकी अंश »